Xirmooyinka gadhka: ku ogaadaan moodooyinka ugu fiican suuqa | Ragga Stylish
Kor u kaca gadhka ayaa ka dhigay garka jarjaraha gadhka ka mid ah aaladaha lagama maarmaanka u ah agabka nadaafadda ee ragga. Waana taas timaha wajiga waa in la jarjaro oo la jaro si joogto ah sidaa darteed waxaad u muuqataa mid aan iin lahayn maalin kasta.
Baadi Qaabkee ayaa ugu habboon baahidaada ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan suuqa. Labadaba moodal la awoodi karo iyo mid dhexdhexaad ah iyo mid heer sare ah. Qaar ujeedooyin badan leh iyo kuwo kale oo kaliya waxay diirada saareen dayactirka gadhka.
1 Qalabka gadhka oo jaban
2 Xirmooyinka garka dhexdhexaadka ah
3 Qalabaynta garka-dhamaadka sare
4 Sida loo isticmaalo timo jaraha gadhka
Qalabka gadhka oo jaban
Haddii aad raadineyso timo jar qaali ah oo jaban oo ujeedo badan leh, tixgeli Philips MG3730 / 15. Waxaa ku jira lix garka iyo shanlada timaha (1-16mm), sanka iyo timaha qalabka timaha, iyo safarka. Hawlgalkeeda wireless ka dib markii lacag buuxda la qaato waa 60 daqiiqo.
La Philips QT4015 / 16 Waxay leedahay naqshad soo jiidasho leh, 90 daqiiqo oo qalliin aan xad lahayn ah waxayna ku qaadataa waqti dheeri ah shanlo, iyadoo ah 0.5 mm meesha ugu hooseysa ee giraangirta dhexe ee wax ku oolka ah. Si kastaba ha noqotee, dhererkeeda ugu sarreeya waa 10mm. Hubi dhererka goynta ugu badan ee mashiinka si aad u hubiso inuu la jaan qaadayo gadhkaagagaar ahaan haddii aad leedahay gadh dhexdhexaad ah ama dheer.
Hadaad ubaahantahay timo jar qaali ah oo jaraya ilaa 20mm, tixgeli Braun BT5070. Waxay bixisaa illaa 25 dherer oo goyn ah iyada oo loo marayo labadeeda shanley, mid seddex maalmood iyo garka gaagaaban iyo midka kale oo garka dhexdhexaadka ah. Hawlgalkeeda wireless waa 50 daqiiqo.
Xirmooyinka garka dhexdhexaadka ah
La Philips BT5200 / 16 es mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee garka lagu qiimeeyo qiimaheeda oo aad u fiican awgood. 60 daqiiqo oo ah hawlgal aan xadhig lahayn iyo 17 boos oo goyn ah (0.4mm ilaa 10mm) oo lagu hagaajiyay giraanta xarunta saxeexa astaanta.
La Remington HC5810 Pro Ceramic Sare es tusaale ah in laga fiirsado dayactirka garka dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhaadheer iyo timo jarista. Waxaa ku jira toban shanlo, 40 mm midka ugu dheer. Waa in la ogaadaa in goynta ugu dhow ee aan shanlo lahayn ay tahay 0.8 mm, sidaa darteed kuma deg dego sida moodooyinka kale marka ay timaado sameynta garka iyo shaarubaha.
Haddii aad raadineyso timo jar ah oo dhex-dhexaad ah oo shaqooyin badan leh, ka Braun MGK3080 waa tusaalahaaga. Waxa intaa dheer in la ilaaliyo seddex maalmood oo aan fiicnayn, gadhka gaagaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah (0.5 ilaa 21 mm), waxaa ku jira qalab loogu talagalay sanka iyo timaha dhagta, jirka oo la badiyo iyo muuqaalka dusha. Muuqaal kale oo ka caawiyay inuu noqdo iibiyaha ugu sarreeya ayaa ah in loo isticmaali karo qubeyska.
Iyada oo nidaamkeeda nuugista, ka Philips 7000 Taxanaha BT7201 / 16 waxay ku siineysaa suurtagalnimada inaad ka booddo tallaabada nadiifinta. Ka sakow wasakh la’aanta, waxay leedahay 20 boos oo goyn ah (0.5mm ilaa 10mm) iyo 60 daqiiqo oo hawlgal xadhig la’aan ah.
Qalabaynta garka-dhamaadka sare
Hadaad ubaahantahay timo jarid xirfadle ah, tixgeli taxanaha Philips 9000. Ku Philips HC9490 / 15 waxay bixisaa wax aan ka yarayn 400 oo goyn go'an oo sax ah 0.1 mm. Tirada ugu badan waa 42mm, sidaa darteed waxay si buuxda ugu shaqeysaa garka dhammaan dhererka. Waxay sidoo kale leedahay daqiiqado 180 oo ah hawlgal aan xadidnayn, goynta xawaaraha turbo, saldhigga lacag bixinta, hareeraha titanium, xusuusta, iyo isdhexgalka mustaqbalka. Caadi ahaan, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu jaro timaha.
La Philips BT9297 / 15 waxay diiradda saaraysaa gadhka. Isku dar a tilmaamaha laysarka si loo muujiyo gadhka si iskumar ah iyo muujinta LED. Waxaa loo isticmaalaa seddex maalmood iyo gadhka gaagaaban, maaddaama kala-goynta ay ka socoto laga bilaabo 0.4 illaa 7 mm oo u dhexeysa 0.2 mm.
Sida loo isticmaalo timo jaraha gadhka
Isticmaal xoqida garka iyo shaambooyada kaa qaada unugyada dhintay iyo wasakhda Waxay ka caawineysaa shanlada si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah timaha wajiga. Waqtigan badbaadinta iyo ka-hortagga-jiidaya ayaa si gaar ah muhiim u ah haddii aad leedahay gar qaro weyn ama dheer, ama labadaba.
Xaqiiqda ah in mashiinka si fiican loo raray, nadiif yahay oo dufan yahay sidoo kale waxay gacan ka gaysataa kor u qaadista khibrada goynta garka. Baasaska waa inay had iyo jeer ka soo horjeedaan hadhuudhka.
Markaad isticmaasho gadhka timaha markii ugu horeysay, ka bilow meesha ugu dheer ee la gooyo oo hoos u sii soco illaa aad ka heshid lambarka aad u baahan tahay. Taxaddarkan yar ayaa kaa badbaadin doona riyada aan fiicnayn ee ah inaad gadhkaaga ka dhigto wax ka badan inta loo baahan yahay oo aad sugto inta ay dib u soo noqonayso.
Dadka qaarkiis waxay qeexaan garka ka hor intaanay goyn, halka kuwa kale doorbidaan inay sameeyaan kadib. Intaad maskaxda ku hayso sumcadda iyo khadka dhabannada, garka iyo luqunta ayaa iswaafajinaya qaabka wejigaaga, Si kastoo amar loo helo.
Si aad u qaabeysid garkaaga sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa xoogaa kala duwan boosaska jarista ee dhabannada, shaarubaha iyo garka. Baadh ilaa aad ka hesho farsamooyinkaaga jarista iyo qaabka adiga kugu habboon. Qof kastaa wuxuu leeyahay qaabkiisa wax u qabashada, timayaasha garka waa inaan laga reebin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha jaraha ugu fiican